National Democratic Front - NDF (Burma): မာနယ်ပလောစာချုပ်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး သဘောတူညီချက်
မြန်မာပြည်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ် ထောင်ပေါင်းများစွာကပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးတို့
နယ်မြေချင်းဆက်စပ်လျက် အတူတကွ အခြေချနေထိုင်လာခဲ့သည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ပိုင်ဆိုင်သည့် တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး၏ ဆန္ဒ ညီညွတ်မှုကိုအခြေခံသည့် စစ်မှန်သော
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်မှသာ စည်းလုံးခိုင်မာစွာ ရပ်တည်သွားနိုင်မည်ဖြစ်
သည်။ ဤသို့ဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်
ကြီးများသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် ဤစာချုပ်သည် လက်တွေ့အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့ပေ။
ယခု မဆလ၊ န၀တ စသော မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးသည့် ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်တို့၏ ကြီးစိုး
မှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနေကြရသည်။ ပြည်သူလူထုသည်
လည်း ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနေကြရသည်။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်
ရေးပျက်ပြားပြီး ပြည်တွင်းစစ်မီး တောက်လောင်လျက်ရှိသည်။
သို့ဖြစ်၍ မြန်မာပြည်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး၊ ပြည်သူလူထုအားလုံးသည် စစ်အာဏာရှင်
အား အပြုတ်တိုက်ပြီးနောက် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသည့် ဒီမိုကရေစီ
နှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်လို
တန်းတူမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊
ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသည့် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ
စစ်အာဏာရှင်ကြီးစိုးမှုအား တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်သော
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောအခြေအနေတွင် -
၀ါဒနှင့် ဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် န၀တအားလည်းကောင်း အဆုံးတိုင် အတူ
၂။ န၀တစစ်အာဏာရှင်ကြီးစိုးမှု ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းသည့် အခြေအနေတွင်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ တက်ရောက်နိုင်သည့် စစ်မှန်သော
၄။ မည်သည့်လူမျိုးကိုမျှ အခွင့်ထူးမပေးရေးနှင့် လူမျိုးစု၊ မျိုးနွယ်စုအားလုံး၏ အခြေခံအမျိုးသား
အခွင့်အရေးများကို ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုမပြုရေးမူကို ကျင့်သုံးသွားမည်။
၅။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသည့် ဒီမိုကရေစီ
နှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်သွား
(က) ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့် ပြည်နယ်များဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်း
ထားသည့် အမျိုးသားပြည်နယ်ပေါင်းစု ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရေး၊
အာဏာ၊ တရားစီရင်မှုအာဏာများ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိရေး၊
(ဃ) ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်များ၏ တပ်မတော်များကို လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထု၏ ကွပ်ကဲ
(င) ပြည်ထောင်စု၏ အချုပ်အခြာအာဏာဖြစ်သော ဥပဒေပြုအာဏာ၊ တရားစီရင်မှုအာဏာနှင့်
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသုံးရပ်ကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိစနစ်ဖြင့် ထားရှိပြီး လွတ်လပ်သည့် တရားစီ
(စ) မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနှင့် ဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြန်လည်၍ ပေါ်ပေါက်မလာနိုင်ရေး
စသည့်အချက်များကို ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးတွင် ကျင့်သုံးသွားမည်။
၁၃၅၄ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လဆန်း (၂) ရက်
to EstablishaFederal Union of Burma
Burma isacountry where indigenous nationalities have lived together in adjacent territories for the last several millenia. It belongs to all indigenous nationalities.
Only whenatrue Federal structure is established based on the desires and aspirations of all the indigenous nationalities will Burma stand united and stable. With this intention, General Aung San and indigenous leaders signed the Pang Long Agreement on February 12, 1949. But that agreement was never enacted in practice.
Currently because of the chauvinistic behavior of the fascist military dictatorship of the Burma Socialist Programme Party (BSPP) and the State Law and Restoration Council (SLORC), the indigenous nationalities are deprived of their ethnic rights. Democracy and basic Human Rights of the people are also abused. National unity has been destroyed and civil war is going on unabated.
Thus, indigenous nationalities and all the peoples must topple the military dictatorship and set upatrue Federal Union where equality, right of self-determination, democracy and basic Human Rights are guaranteed.
To attain equality, freedom, unity, security, fraternity, trust and development in the Federal Union, the main tasks which are necessary are to topple the SLORC military dictatorship and to establish democracy, peace and true Federal Union. To achieve these aims, the:
1. National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB)
2. National League for Democracy, Liberated Area (NLD-LA)
3. Democratic Alliance of Burma (DAB), and
4. National Democratic Front (NDF)
have resolutely agreed to the following at Manerplaw on July 31, 1992.
1. We will struggle together to end Chauvinism and the fascist military dictatorship of the SLORC.
2. After ending the SLORC military dictatorship and when freedom and peace are attained,atrue national convention involving all indigenous nationalities and all political parties will be convened.
3. We will draw upatrue Federal Union constitution in accordance with the desires of indigenous nationalities and all peoples.
4. We will follow the principles that no nationality shall have special privileges and no restrictions will be imposed on the basic rights of any nationality or minority in the Union.
5. We will buildaFederal Union where all indigenous nationalities enjoy equality, rights of self-determination, democracy and basic Human Rights to the fullest extent. In doing so:
a. The Kachin, Karen, Chin, Mon, Burman, Arakan, Shan poeples, etc. will have National States.incorporated inaFederal Union of States.
b. The National States will assign certain power to the Federal Union and the remaining powers will be exercised by the National States including legislative, administrative and judicial powers.
c. The Federal Union will consist of two houses of Parliament: The National Assembly (Upper House) and The People’s Assembly (Lower House).
d. In accordance with the principle of civilian supremacy over the military the Federal Union and State armies will be put under the direct supervision of the Elected Governments.
e. The legislative, administrative and judicial branches of the Federal Union Government will be checked and balanced in power, and the judiciary will be independent.
f. The Constitution will be designed to prevent any re-emergence of Chauvinism and fascist dictatorship in the future.
Naing Shwe Kyin
2nd Waxing of Wakhaung 1354 ME
31st July, 199
Posted by National Democratic Front - NDF at 1:12 PM